AmaSatellites eVenus: imibono, izifiso kanye nezimfihlakalo | Isimo Sezulu Senethiwekhi
El iplanethi venus ngelinye lamaplanethi elingenazo iziphuphutheki zemvelo. Kuyiplanethi yesibili ukusuka elangeni kusimiso sethu sonozungezilanga futhi kungabonakala kuplanethi yethu njengento ekhanya kakhulu. Yaziwa njengeplanethi yenkanyezi yasekuseni ngoba ibonakala njengokushona kwelanga. Ibekwe endaweni esentshonalanga ukuze ivele. Kuneminye imibono yezemidlalo esiyibonayo ukuthi ayinazo iziphuphutheki yingakho sizokhuluma nge iziphuphutheki ze-venus.
Kulesi sihloko sizokutshela konke odinga ukukwazi mayelana nama-satellite e-Venus nezimfihlo zawo.
1 Izici zeplanethi yeVenus
2 Ezinye izifiso
3 Iziphuphutheki ze-venus
4 Imibono mayelana neziphuphutheki zeVenus
Izici zeplanethi yeVenus
Okokuqala kunakho konke ukwazi ezinye izici zale planethi ngaphambi kokwazi izimfihlakalo ezizungeze iqiniso lokuthi siyabona ukuthi ayinazo iziphuphutheki. Kusukela ezikhathini zasendulo, leplanethi yaziwa ngegama likaHesperus lapho ibhekwa kusukela kusihlwa. Wayenelinye igama futhi wayenguLusifa lapho ebonwa kusukela ekuseni. Siyazi ukuthi uVenus ngeke ibonakale ngaphezu kwamahora amathathu ngaphambi kokuphuma kwelanga noma amahora amathathu emva kokushona kwelanga. Izazi zezinkanyezi zokuqala ezaqala ukutadisha iVenus zacabanga ukuthi iqiniso lokuthi ziyizindikimba ezimbili ezihlukene ngokuphelele zezulu lingaba yiqiniso.
Le planethi inezigaba ezehlukene njengenyanga uma ibonwa kusibona-kude. Ngaso sonke isikhathi lapho iVenus iqeda ukudlula kwayo kokuphakeme ingabonakala ngosayizi omncane ngoba yiwona aqhelelene nelanga. Ngokuphambene nalokho, yize kubonakala sengathi akunangqondo, izinga eliphakeme lokukhanya kwale planethi kufinyelelwa lapho kusesigabeni esikhulayo.
Okufana nalokho okwenzeka nenyanga kwenzeka ngeVenus. Izigaba nezikhundla zayo kuyaphindwa esikhathini esiyiminyaka eyi-1.6. Izazi zezinkanyezi zibhekisela kule planethi njengePlanethi yoMfowethu Yomhlaba. Futhi kuyiplanethi efanayo ngosayizi, ubukhulu, ubukhulu nevolumu. Ososayensi bacabanga ukuthi kunjalo kanti uVenus wayeyibanga elifanayo ukusuka elangeni lomhlaba wethu okwakungaba nempilo kulo. Kepha, ekubeni kwenye indawo yesimiso sonozungezilanga, sekuyiplanethi enezimo ezihluke kakhulu kunezethu.
Phakathi kwezici eziyinhloko enakho ukuthi ayinazo izilwandle futhi ayinazo neziphuphutheki. Iziphuphutheki kumele zibe nemicabango ethile esizoyibona ngezansi. Kubuye kuzungezwe umoya osindayo kakhulu onokwakheka ikakhulu kwe-carbon dioxide ngakho-ke awukho umusi wamanzi. Amafu entantayo angabonakala ngezibonakude ezinamandla ngokwengeziwe akhiwe nge-sulfuric acid. Ngokungafani nokwenzeka emhlabeni wethu, sithola ingcindezi yasemkhathini ephakeme izikhathi ezingama-92. Lokhu kusho ukuthi akekho umuntu ongaphila emhlabeni umzuzu.
Okunye okuthandwayo okuthinta le planethi ukuthi yaziwa njengeplanethi eshisayo. Futhi ukuthi izinga lokushisa ebusweni balo lizungeze ama-degree angama-482. Izinga lokushisa lidalwa ngumphumela omkhulu wokushisa okhiqiza umoya wayo ominyene futhi osindayo. Ngokungafani neplanethi enguMhlaba, enomphumela wokushisa okushisa okusiza ukukhuthaza amazinga okushisa amnandi, nakhu ihaba. Onke amagesi avaleleke emkhathini wawo futhi awakwazi ukufinyelela esikhaleni. Lokhu kudala ukuthi iVenus ishise kuneMercury yize iseduze nelanga.
Usuku olukuVenus lulingana nezinsuku ezingama-243 eMhlabeni futhi lude kunomnyaka walo wonke oluthatha izinsuku ezingama-225. Lokho wukuthi, kuthatha isikhathi eside ukuziphendukela ngokwakho kunokuzungeza ilanga. Elinye ilukuluku lokugcina ukuthi uma umuntu engahlala lapha, babekwazi ukubona ukuthi ilanga liphuma kanjani entshonalanga nokuthi ukushona kwalo kungaba kanjani empumalanga.
Kunemibono eminingi yeziphuphutheki zeVenus kusistimu yelanga. Ngaphandle kweqiniso lokuthi kunezinyanga eziningi ohlelweni lwonozungezilanga, kusuka kwezinye ezingenamoya onjengeNyanga kuya kwezinye ezinesimo esishubile njengeTitan uyabona ukuthi iVenus ayinazo iziphuphutheki. Siyazi ukuthi iVenus neMercury kungukuphela kwamaplanethi kuhlelo lwelanga angenazo izinyanga zemvelo ezizungezayo. Isizathu salokhu yinto ososayensi abaningi kuwo wonke umlando abaye bayifuna.
Kulapha lapho izazi zezinkanyezi zibheka amathuba athile angahle achaze ukuthi kungani lamaplanethi amabili engenazo izinyanga. Okokuqala ukuthi iziphuphutheki zemvelo zathathwa ngamandla alawa maplanethi lapho zidlula eduze kwawo. Lokhu kungaba njalo Las izinyanga ezincane zama-mars eyaziwa ngokuthi iPhobos neDeimos. Esinye isimo esingabonwa ukuthi iplanethi iVenus izonqoba umthelela omkhulu ozokhipha ingxenye yento yayo emkhathini. Lezi zinto kamuva zazizokwakha isathelayithi, nokuyinyanga yethu.
Enye yezinkolelo-mbono ezikhona mayelana neziphuphutheki zeVenus ukuthi zingakhiwa kanye nomhlaba ngokuqongelela okokusebenza okwakusele ngesikhathi kwenziwa iVenus. Ngale ndlela, izinyanga zizoba yingxenye yomhlaba wonkana.
Imibono mayelana neziphuphutheki zeVenus
Uma sibheka eminye yemibono enesixakaxaka futhi enamandla kakhulu maqondana nesistimu yokuqala yelanga, kufanele sazi ukuthi kwakukhona izinkulungwane zemizimba emincane ezungeza phakathi kwemizila yamaplanethi ahlukahlukene. Kulapha lapho ososayensi behlatshwa umxhwele yiqiniso lokuthi asinayo i-satellite yemvelo. Lapha ubuzwa umbuzo wokuthi ngabe uVenus wayengaba nezinyanga yini esikhathini esedlule. Abanye abacwaningi baveze ucwaningo lapho bengasho khona lokho UVenus kungenzeka ahlupheke okungenani yimithelela emibili emikhulu yimizimba emikhulu phambilini benza izinyanga zabo zinyamalale.
Kungenzeka ukuthi, uVenus kungenzeka ukuthi wakhiwa inyanga encane kusuka kumfucumfucu owawukhishwe emhlabeni ngemuva komthelela omkhulu womzimba omkhulu. Ngenxa yamandla adonsela phansi, isathelayithi yayihamba ize ingathonywa amandla adonsela phansi eVenus. Ngale ndlela, kungenzeka ukuthi iplanethi inqobe umthelela olandelayo futhi iguqule ukujikeleza kweplanethi, idale umphumela ohlukile. Lokhu kubangela umphumela wamagagasi ukwenza ukuthi iziphuphutheki zisuke kude neVenus.
Ngiyethemba ukuthi ngalolu lwazi ungafunda kabanzi mayelana neziphuphutheki zeVenus nokungabikho kwazo.
Indlela ephelele ye-athikili: Isimo Sezulu Senethiwekhi » Isayensi yezinkanyezi » Iziphuphutheki ze-venus